Buugga xusuus -qorka Shiinaha & Warshadaha Xusuusta dhejiska ah iyo soosaarayaasha | SJJ
Buugga xusuus -qorka iyo qoraallada dhegdhega leh ayaa kaa caawin kara inaad la socoto hawlaha dugsiga ama joornaalka ku saabsan xusuusta kooxda aad jeceshahay. Bixinta weyn ee kooxda, dhacdooyinka shirkadaha iyo waxyaabo kaloo badan. Lagu habeeyay magaca shirkadaada ama astaantaada, kaa caawiya inaad kor u qaaddo meheraddaada iyo astaantaada.
Buugga xusuus -qorkaiyo qoraallo dhegdheg leh ayaa kaa caawin kara inaad la socoto hawlaha dugsiga ama joornaalka ku saabsan xusuusta kooxda aad jeceshahay. Bixinta weyn ee kooxda, dhacdooyinka shirkadaha iyo waxyaabo kaloo badan. Lagu habeeyay magaca shirkadaada ama astaantaada, kaa caawiya inaad kor u qaaddo meheraddaada iyo astaantaada.
Qiimuhu wuxuu ku tartamayaa soo -saarayaasha jira. Fadlan na sii faahfaahinta faahfaahsan, sidoo kale tirada iyo sawirrada; waxaan kugula talin lahayn qiimaha ugu fiican inta aan shaqeyneyno. Waxaan sugeynaa weydiintaada waxaana hubineynaa inaadan niyad jabin doonin.
Buugga xusuus -qorka ee gaarka ah & note dheg dheg
Qoraallo aad u tiro badan oo qaabab kala duwan leh, midabbo leh, iyo in ka badan
Koollo gaar ah oo loogu talagalay in lagu isticmaalo warqad ama qorsheeyeyaal
Naqshadee oo samee adigu buugaagta xusuus -qorka ee caadada u ah farshaxankaaga
Adeeg aad u fiican, qiimo iyo tayo, gaarsiin degdeg ah
Xiga: Qalinka Qalinka
buuga xusuus qorka
Buugga xusuus -qorka ee gaarka ah
buugaagta xusuus -qorka ee caadada u ah
note dheg dheg
Buugga xusuus -qorka
buugaag xusuus qor ah